Home » Vaovaom-panambadiana tantaram-pitiavana tantaram-pitiavana » Fanambadiana ho an'ny tanjona mandritra ny COVID-19
Fanambadiana ho an'ny tanjona
Na misy coronavirus manjelatra erak'izao tontolo izao, ny fampakaram-bady dia mbola mijanona eo afovoany rehefa mankalaza ny firaisan'ny fitiavana. Nancy Barkley, mpanorina sy tompon'ny Honeymoons & Get-A-Ways, izay mitantana ny Tambajotra iraisam-pirenena fizahantany (WTN) Vondrona mahaliana ho an'ny fampakaram-bady Destination sy Honeymoon Travel, dia nitarika resadresaka nifanaovana tamin'ity sehatra ity izay orinasa lehibe na inona na inona mitranga eto an-tany.
Nampiditra an'i Nancy i Modérator, Juergen Steinmetz, ary nilaza hoe: “Matetika izahay vao manambady eo amin'ny fiainantsika, noho izany dia zavatra tena miavaka ary mendrika ny sain'ny maro. Ny olona toa an'i Nancy dia mahalala ny olona mety ao amin'ity orinasa ity hanome toky fa hisy fankalazana tsy hay hadinoina. ”
Nampahafantatra ny tenany i Nancy, nandefa avy tao Philadelphia, Pennsylvania, nizara fa efa tao amin'ny sehatry ny fandraisam-bahiny nandritra ny 25 taona izy. Izy no Planner Wedding Destination mariazy sy Honeymoon Planner voamarina, ary izy koa dia mipetraka eo amin'ny filankevitry ny Fikambanan'ny Mpanamboatra ny Destination Iraisampirenena. Nanomboka ny orinasany tamin'ny taona 2005 izy tamin'ny faniriana hanambady mariazy.
Hoy i Nancy: “Azoko antoka fa samy manana ny tantarany tamin'ny taon-dasa isika rehetra rehefa namely ny areti-mandringana. Fantatro ny tenako fa nanana mpivady be dia be aho nanambady sy nanambady tamin'ny fihenjanana sy ny fiovana ary ny fanafoanana, saingy tsy te hieritreritra an'izany aho. Ity dia momba ny fanantenana amin'ny 2021 ary handroso. "
Aorian'ilay endrika dinika an-databatra boribory dia henoy ny zavatra zarain'i Nancy sy ireo izay manatrika momba ny fampakaram-bady sy ny volan-tantely, manomboka amin'i Marian Muro, Tale Jeneralin'ny birao fizahan-tany any Barcelona.
Manoro hevitra ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana amin'ny famoahana pasipaoro vaksinin'ny COVID